Ihe mere vidiyo vidiyo azụmahịa gị kwesịrị iji dị na Vimeo | Martech Zone
Tuesday, May 14, 2013 Wenezdee, Jenụwarị 21, 2015 Douglas Karr
Anyị hụrụ n'anya Vimeo Pro (nke ahụ bụ njikọ njikọ anyị) ma anyị na-agba ndị ahịa anyị ume ịnabata vidiyo ha ebe ahụ maka ọtụtụ ebumnuche (na mgbakwunye Youtube). Ọ bụ ezie na Youtube nwere ọtụtụ nyocha vidiyo, mkpọtụ nke vidio vidio ndị na-atọ ọchị bụ naanị ihe ọchị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịchọta ihe ị na-achọ. Na Vimeo, ị nwere ike ịchọta vidiyo gị ka ịchọta ma lelee ya ọtụtụ oge - naanị n'ihi na enweghị mkpọtụ niile.
Vimeo Pro awade a mfe kwa afọ price nke $ 199 kwa afọ ruo ihe 50Gb na 250,000 ejije. Nke a dị ọnụ ala karịa na nyiwe ndị ọzọ nwere ọnụ ahịa transperent na ntinye ọnụ. Ọrụ nnabata vidiyo ndị ọzọ nwere ike isi na $ 600 ruo ọtụtụ puku dollar.
Ndị ọzọ Vimeo Pro Atụmatụ
Mobile, Mbadamba ụrọ na TV Ndakọrịta
Egwuregwu vidiyo ahaziri
Ndakọrịta HTML5 zuru ezu
Nke Atọ Video Player Nkwado
Playback HD HD
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ chọrọ ka a kwụọ gị ụgwọ maka vidiyo gị, Vimeo nwekwara Vimeo Na-achọ. Vimeo Na-achọ bụ nkesa-na-na-na-ekesa na niile Vimeo si video ọkpụkpọ, mfe iji, na a omiiko na-ege ntị. Ndị na-emepụta ụdị dị iche iche nwere ike kesaa ọrụ ha n'ịntanetị, chọta ma jikọọ na ndị na-ege ntị, ma nwetakwuo ego site na ntisa ego 90/10.
Vimeo On Demand na-enye ndị okike mgbanwe na njikwa na-enweghị atụ: ndị okike nwere ike igosipụta ọrụ ha na ibe mara mma, nke nwere ike ịhazi; setịpụ ọnụ ha; ma ree oru ha na saiti ha, site na Vimeo, ma obu site na abuo. A na-ewu ihu akwụkwọ niile Na Nchọpụta zuru ụwa ọnụ nke Vimeo nke ruru ihe karịrị nde ndị na-ekiri 90.
Jikọọ Vimeo Pro ma nweta nnabata vidiyo azụmaahịa maka ihe na-erughị $ 17 kwa ọnwa.
Tags: video na inavimeo na inavimeo pro